Maansayahankii Koowaad – Garanuug
Home / Af Soomaali / Maansayahankii Koowaad
Maxamed Aadan Ciiraale August 26, 2015	Af Soomaali, Qoraallo 3 Comments 2,756 Views
Haddii aan isku dayo in aan ka jawaabo su’aasha dambe, maanso waxaa lagu qeexi karaa: waa soo noqnoqoshada hirar codeed oo is laa-le’eg.
Tusaale ahaan, haddii qof yiraahdo:
Damalkaa tukaa fuushan – tukihii damalkii waa ka duulay. Waa hadal ee maanso ma aha. Waayo hirar-codeedkii koowaad la lama sii raacin ee bad hor leh ayaa la furay. Haddiise la yiraahdo sidatan:
Damalkaa tukaa fuushan – tukihiina waa duulay – mid kalaa ka daba ‘taw’ leh – damac baa ku yiri ‘tiigso’. Waxay noqonaysaa maanso. Waxaana yeelay, waxaa la la sii raacay hirar-codeedkii koowaad.
Haddaan ku noqdo su’aashii ahayd qofkii ugu horreeyey oo maansooda, dabcan lama yaqaan, laakiin, waxaa dhab ah in uu jirey qof maansada bilaabay oo aan looga horrayn ama dad meelo kala duwan ka bilaabay iyagoo aan looga horrayn. Waxaa kaloo su’aashaani keeni kartaa midda ah: Yuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo hadlay?. Kolleyba hadallada Aadanuhu waa laamo ka farcamay isku jirrid dabadeedna kala leexday, af walbaa na uu maansadiisa iyo qaabka ay yeelanayso ku keliyaystey. Marka aynu ka hadlayno bilaabashada maansada’na, laga ma wado in ay jirtey muddo dheer oo ay dadku hadal keliya yiqiinneen oo aysan maansoon jirin. Waxay tilmaantu ku mudan tahay oo aynnu farta ku fiiqeynaa waxa weeye: soohdinta u dhexeysa tix iyo tiraab iyo markii ugu horreysey oo laga tilaabay iyo qofkeedii.
Previous Unug (Cell; الخلية)
Next Jaamacadda Tolka!
Siciid M. "Beegsi"
Maxamed Aadan Ciiraale, runtii waxa yaab iyo amakaag leh weyddiimaha aad ka soo aroorisay (Hypotheses) ee aad is ka weyddiisay waxyaabihii keenay in maanso la curiyo iyo siyaalihii loo curiyey -Jiiftada dhexdeeda. Waa maanso fikir dheeraad ah iyo farshaxan halabuur oo heer sarreeya ku qotonta. Wax badan baad ii iftiimisay. Mahadsanid.
Leave a Reply to Siciid M. "Beegsi" Cancel reply
March 30, 2017	43,603